पश्चिमाञ्चल क्षेत्रकै ठूलो अस्पताल प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण, तोकेको समय र अनुमान गरेभन्दा कम लागतमै सम्पन्न
तोकेको समय र अनुमान गरेभन्दा कम लागतमै सम्पन्न यस्ता नमूना निर्माणबाट पनि सिक्ने हो कि निर्माण व्यवसायीले !
| 2018-02-11 Published सागर परियार
निर्माण सञ्चार, जुम्ला । कर्णालीमा ३ सय शैयाको अस्पताल अब पश्चिम नेपालका जनता स्वास्थ्य सेवाको पहँुचमा निर्माण सञ्चार, जुम्ला ।
पश्चिम नेपालकै ठूलो र गौरवका रुपमा हेरिएको ३ सय शैय्याको अस्पताल कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लालाई आइतबार हस्तान्तरण गरिएको छ ।
एक विशेष कार्यक्रमका बीच अस्पतालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन तथा हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
कुनै पनि निर्माण कार्यहरु समय सीमाभित्रै र तोकेको कम लागतमा निर्माण सम्पन्न नभइरहेको नेपालमा यो अस्पताल उदाहरण बनेको छ ।
तीन वर्ष भित्र निर्माण कार्य सक्ने भनिएको ३ महिना अगावै अस्पताल भवन बनिसकेको हो भने ९१ करोडको लागत अनुमान गरिएको अस्पताल ७६ करोडमै सम्पन्न भएको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले निर्माण सम्पन्न ३ सय शैय्याको उक्त अस्पतालको मूलद्वारमा रिबन काटेर उद्घाटन गरेका हुन् ।
उद्घाटनसँगै प्रधानमन्त्री देउवाले हाल १ सय शैय्यामा उपचाररत बिरामीलाई फलफूल समेत वितरण पनि गरेका थिए ।
आउने फागुन १५ गते भित्र उद्घाटन तथा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको अस्पतालको प्रधानमन्त्री देउवाको चाहनामा अगाडि नै उद्घाटन तथा हस्तान्तरण गरिएको हो ।
निर्वाचन लगत्तै दोस्रो पार्टीको हैसियतमा सीमित नेपाली काँग्रेस र कामचलाउ सरकार भइसकेको कारणले सरकारबाट जति बेला पनि हट्नु पर्ने भएपछि देउवाले चाँडै नै उद्घाटन गर्न आयोजकलाई भनेका थिए ।
जुम्लामा रहेको स्वास्थ्य भवनमै पुगेका प्रधानमन्त्रीले देउवाले कर्णालीमा ३ सय शैय्याको अस्पताल बन्नु भनेको इतिहासकै कायाकल्प रहेको बताए ।
उनले पश्चिम नेपालका जनता स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । पश्चिम नेपालमै ३ सय शैय्याको भवन निर्माण पछि यो क्षेत्रले आफूलाई राष्ट्रिय स्तरको हैसियतमा उठाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसँगै उद्घाटन गर्न पुगेका स्वास्थ्य मन्त्री दीपक बोहोराले प्रतिष्ठान र अस्पतालका लागि आवश्यक सहयोगका गर्न आफू तयार रहेको दाबी गरेका छन् ।
९१ करोड लागत अनुमानको अस्पताल बन्यो ७६ करोडमै
हरेक ठेक्का भने भन्दा बढी लागत र समय लाग्ने नेपालमा जुम्लाको यो अस्पताल भने अपवाद बनेको छ । जसको लागत र निर्माण समय अनुमानभन्दा कम रहेको छ ।
निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गर्दा ९१ करोड लागत अनुमान गरिएको थियो तर तयार हुँदा ७६ करोड रुपियाँमै सम्पन्न भएको आयोजकले दाबी गरेको छ ।
३६ महिना भित्र सकिने भनिएको अस्पताल ३ महिना अगावै निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण गरिएको हो । यसको निर्माण ठेक्का रसुवा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले लिएको थियो ।
प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार काफ्लेका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा रसुवा कन्स्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीले सबै भन्दा कम ७६ करोड ठेक्का हालेपछि उसैले टेन्डर पाएको थियो ।
कर्णालीवासीको आसा– एक चक्की सिटामोल र जीवन जलको अभावमा ज्यान नजाला कि !
दुर्गम कर्णाली नेपालको समग्र इतिहासको नियतीका रुपमा रहेको छ । जहाँका जनता ज्वरो आउँदा एक चक्की सिटामोल र झाडा लाग्दा एक मुट्ठी जीवन जल नपाएर मर्ने गरेका छन् ।
तर, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रकै ठूलो अस्पतालको उद्घाटनसँगै कर्णाली क्षेत्रका जनताले एक चक्की सिटामोल नभएकै कारण अब ज्यान नजाने आसा व्यक्त गरेका छन् ।
तर, यहाँ आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति तथा औषधीको भने जहिले पनि अभाव रहिरहने हुँदा उपयुक्त व्यवस्थापन भएन भने अस्पतालको भवन भवनमै सीमित रहने डर पनि जनताहरुले गरेका छन् ।
पश्चिम नेपालकै ठुलो अस्पताल जुम्लामा बनेपछि अब स्तरीय सेवा सर्वसुलभ रुपमा छिटो छरितो पाइने भन्दै कर्णालीवासी उत्साही बनेका छन् ।
स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुन नपाउदाँ अकालमै मरेका दिनहरु सम्झदै अब कर्णालीमा नै ठुल्ठूला समस्याको समाधान हुने भन्दै उत्साही भएका हुन् ।
एक टाटा सिटामोल र एक पुरिया जीवन जल नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने विगतको स्थिति अब नरहने कर्णालवासीको अपेक्षा छ ।
उद्घाटन समारोहमा आएका एक सर्वसाधारणले अस्पताल बनेकोमा आफू निकै खुसी भएको बताए ।
आफ्नी पहिलो श्रीमती गर्भवती हुदाँ उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको दिन सम्झदै तातोपानी गाउँपालिका–२ का निलो कामीले भने, ‘अब दिदीबहिनीहरुले त्यस्ता कुनै स्वास्थ्य समस्या भोग्नु नपर्ने भयो ! अब त गरिबका पनि दिन फर्कने भए !’
यो अस्पताल ६ नम्बर प्रदेशकै ठूलो अस्पातलका रुपमा रहेको छ ।
आवश्यक जनशक्ति र उपकरणको समस्या यथावतै
हिमाली जिल्ला जुम्लामा २०६८ सालमा स्थापना भयो कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान । तर आजसम्म पनि प्रष्ठिान दुई समस्याबाट सुरुदेखि नै पीडित छ, आवश्यक उपकरण र चाहिने मात्रामा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव । यो क्षेत्रकै चुनौती हो यो ।
प्रतिष्ठानमा सिटिस्क्यान, आसियु, एमआरआई लगायत मेसिन नहुँदा उपचारमा समस्या ज्यूँकात्यूँ रहेको अस्पतालका कर्मचारी बताउँछन् ।
आफूलाई पश्चिम र सुदूरपश्चिको नेता ठान्ने काँग्रेस सभापति देउवाले तामझामका साथ अस्पतालको उद्घाटन गरे पनि यसलाई चाहिने स्वास्थ्य उपकरण र स्वास्थ्य कर्मीको दीर्घकालीन समाधानबारे भने केही योजना नै बनाएका छैनन् । न त स्वास्थ्य मन्त्री बोहोराले ।
अस्पताल प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गरिए पनि अत्याधुनिक उपकरण जडान भने गरिएको छैन् ।
आवश्यक उपकरण नभएकै कारण कतिको अकालमै ज्यान गएको छ । उपकरण बिना हाडजोर्नी, अप्रेशन, सिटिस्क्यान जस्ता काम अझै पनि यहाँ गर्न नसकिएको कार्यरत अधिकारीहरुकै भनाइ छ ।
अस्पतालका विषेशज्ञ डा. देउमान लिम्बुले स्वीकार गर्दै भने, ‘यो तीतो सत्य हो कि यहाँ आवश्यक अत्याधुनिक उपकरण पनि छैनन् । सरकारले पनि यसबारे सोचेजस्तो लागेन । हामीले चाहेर पनि विशेषज्ञहरुलाई यहाँ रोक्न सकेका छैनौं । यहाँ चाहिने मात्रामा डाक्टरहरु राख्न सरकारले उनीहरुलाई उत्प्रेरणा गर्ने नीति नै बनाउनु पर्छ ।’
सिटिस्क्यान र आइसियु मेसिन खरिद गर्नको लागि झण्डै ३ करोड रुपियाँ आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ । तर, यतिबेला अस्पतालले खरिद गर्नसक्ने अवस्था छैन् ।
स्तरीय सेवाको प्रयास
निर्माण सञ्चारसँग कुरा गर्दै प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. राजेन्द्रराज वाग्लेले भने, ‘कर्णालीमा पश्चिम नेपालकै ठुलो अस्पताल बन्यो हाम्रो अवसर हो ।
तर त्यतिकै स्तरीय सेवा दिन तथा व्यवस्थापन गर्न भने सहज छैन ।’ तीन सय शैय्या अस्पताल आफैमा सञ्चाति नहुने भन्दै उनले सरकारले नै यसबारे गम्भीर चासो लिनु पर्नेमा जोड दिए ।
उनले भने, ‘सुख्खा जंगलमा गाइवस्तु लगेर छाडिदिनुस् उनीहरु कसरी अडिन सक्छन् । यहाँको समस्या पनि यस्तै छ । दक्ष जनशक्ति यहाँ आउन मान्दैनन् । ३ सय शैय्याको अस्पतालमा त्यतिकै बिरामी त हेरिदैन ।’
तर कर्णाली क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य अनुसन्धान प्रतिष्ठानले गर्ने उद्देश्य भने प्रतिष्ठानले राखेको छ ।
प्रतिष्ठान भने अस्पतला बन्नु अघिदेखि नै सिटिस्क्यान, एक्सरे मेसिन जस्ता उपकरणका लािग दातृनिकायदेखि सरकारसँग हारगुहार गर्दै आएको छ ।
यस अघि पनि प्रतिष्ठानले १०० शैय्याको अस्पताल, २५ जना विशेषज्ञ डाक्टरसहित १ सय ५० जना जनशक्तिले सेवा र सस्तो दरमा ठूला शल्यक्रिया जुम्लामै गरेको रेकर्ड पनि छ ।
प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार काफ्लेका अनुसार गतवर्ष २९ हजार ९ सय ३४ जना बिरामीले सेवा लिएका थिए । तिन मध्ये २ हजार ४ सय ९१ जनाको ठूलो शल्यक्रिया भएको बताए ।
त्यसैगरी, विपन्नलाई निःशुल्क उपचार, स्वास्थ्य बीमा सुरु, स्टाफ नर्स चौथो र हेल्थ असिष्टेन्ट तेस्रो ब्याज सञ्चालन गरिहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘ऐनले व्यवस्था गरे बमोजिम ४५ प्रतिशत पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्तिले यहाँ अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्दै आएका छन् ।’
अझै एमबिबिएस सञ्चालन गर्ने, आफ्नै फार्मेसी खोल्ने, ब्लड बैंक स्थापना गर्ने, अक्सिजन प्लान्ट राख्ने लगायतका काम हुने सकेको छैन ।
यसका लागि अझै केही महिना लाग्ने छ । अस्पतालको नयाँ भवनमा १ सय ५० किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ ।
दुर्गममा पहिलो अनुसन्धानमूलक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान
स्वास्थ्य अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना गरिएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्वास्थ्यमा अनुसन्धान समेत गरिरहेको छ ।
प्रतिष्ठानले कर्णालीमा स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा क्षेत्रमा प्रभावकारी सञ्चालन गरिरहेको अवस्थामा स्वास्थ्यमा अनुसन्धान गरेको हो ।
साविकको कर्णाली अञ्चलका मुगु, जुम्ला र कालिकोट जिल्लामा सर्वे सम्पन्न भइसकेको छ, अब प्रतिष्ठानको कार्य क्षेत्र अन्तर्गत प्रदेश नम्बर ६ भित्र पर्ने नौ जिल्लामा स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रतिष्ठान जुम्लाले गर्ने छ ।
प्रत्येक ३३ महिनामा जाजरकोट, कालिकोट मुगु, हुम्ला र डोल्पामा विशेषज्ञ सेवा दिने गरिएको छ भने, सुर्खेतमा पनि विशेषज्ञ टोली खटाइएको छ ।
पश्चिमकै ठूलो ३ सय शैय्या अस्पताल उद्घाटनको तयारी पूरा, देउवाले उद्घाटन गर्दै
प्रतिष्ठानले सबै जिल्लाको स्वास्थ्य अवस्थाको तथ्याङ्क लिएर तथ्यांक अनुसार उपचार सेवाको मार्ग खोल्न अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने बताएको छ ।
प्रत्येक जिल्लामा गरिएको विशेषज्ञ सेवाले गर्दा प्रतिष्ठान प्रति सबैको विश्वास पनि बढ्दै गएको छ ।
बल्ल बल्ल सिनेट वैठक, तर बन्यो उपलब्धिमूलक
प्रधानमन्त्री अध्यक्षता रहेको प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक उपलब्धिमूलक हुँदै गएका छन् ।
दुई वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसकेको सिनेट बैठकमा बहु–सरोकारको स्थानीयवासीले निःशुल्क दिएको १ हजार ५ सय रोपनी जग्गा पास गराउन पहल गर्ने निर्णय भएको छ ।
राप्ती जिल्ला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा सम्पन्न पहिलो सिनेट बैठकले जुम्ला प्रतिष्ठानका लागि निकै महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको निर्देशक धर्मराज गोसाईले बताए ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य शिक्षाको ब्याचलर अफ मिडवाफ्री सञ्चालन गर्ने, ६ नं प्रदेशमा विशेषज्ञ सेवा सुरु गर्ने, बहिरंग विभाग सञ्चालन गर्नेजस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णय भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
यसैगरी, प्रतिष्ठानले नेपालगञ्जबाट आपूर्ति गर्दै आएको अक्सिजन प्लान्ट र ब्लड बैंक जुम्लामा पनि व्यवस्था गर्ने भएको छ ।
आगलागीबाट पीडित प्रतिष्ठान
केही गर्न खोज्दा ठेस लागेभैं स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले प्रगति गर्दै गरेको अवस्थामा ओपिडी कक्ष केही समय अघि आगलागीबाट पूरै ध्वस्त भएको थियो ।
०७२ पुस ३ गते राती २ बजे अज्ञात समुहद्वारा आगजनी गरेको थियो । आगलागीबाट प्रतिष्ठानले करोडौं क्षति व्यहोर्नु पर्यो ।
प्रतिष्ठानको आगजनीका विषयमा केन्द्रीय अनुसन्धन व्यूरो (सिआइबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, आजसम्म पनि केही पनि पत्ता लागेको छैन ।
आगलागीबाट प्रतिष्ठानको प्रयोगशाला, एक्सरे, अल्ट्रा साउन्ड, डेन्टल, फार्मेसी, इन्डोस्कोपी सहित महत्वपूर्ण उपकरण र अन्तरंग विभाग नै पूर्णरूपले ध्वस्त भएको थियो ।
हेर्न बाँकी छ, गरे हुने छ
यसरी पश्चिम क्षेत्र कर्णालीले आफ्नो काखमा ३ सय शैय्याको अस्पताल पाएर आफ्नो विकासे हैसियत माथि उठाएको अवस्थामा आउँदा दिन कस्तो हुने छ भन्ने हेर्नु सिबाय केही छैन ।
तैपनि, मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अब बनेका सांसद, संसद र प्रदेश सरकारहरु पनि स्थानीय तहमै रहने हुनाले यो अस्पतालले पश्चिमदेखि सुदूरपश्चिमसम्म नै माइलस्टोनका रुपमा आफूलाई स्थापना गर्न सक्ने अवस्था पनि निकै बलियो देखिन्छ ।
जुम्लाबाट सागर परियारको फिचर रिपोर्ट
आइतबार, २८ माघ, ०७४